Ntuziaka Lingonberry maka Winter: Otu esi ejikere Berry na sirop - Berry - 2020
Lingonberry na sirop maka oge oyi: nhazi uzọrọ site na nzọụkwụ na foto
Lingonberry, ma ọ bụ, dị ka ndị nna nna anyị kpọrọ ya, beri nke anwụghị anwụ, ọtụtụ ndị hụrụ ya n'anya nke ọma na-esi ísì ụtọ ya, uto na-atọ ụtọ na ọtụtụ ọgwụgwọ ọrịa. Mkpụrụ ọṅụṅụ dị iche iche, ihe oriri, jams, chara na-eme ka ndị mmadụ na-elekọta ahụike ha ma chọọ ka ha nọgide na-eto eto na ume ike ruo ọtụtụ afọ.
Ihe ị chọrọ n'ime kichin: ngwa na arịa
Atụmatụ nke nhọrọ ngwaahịa
Ntụziaka nhazi site na ntanetị
Lingonberry na sirop: ihe iji gbakwunye
Atụmatụ na iwu maka ịchekwa ọrụ ahụ
Ma ihe niile nwere ike iji blanks blanks
Ọrịa ma na-asụgharị
Mkpa na contraindications tomato
A obere, ma incredibly aromatic na mara mma beri, lingonberry bụ ama n'ihi na ya pụrụ iche uru Njirimara na uto. N'ihi nke ikpeazụ, o kwesịrị ebe pụrụ iche na kichin. Berry, ya na tart, uto na uto ilu, ka eji kwadebe ihe di iche iche maka oyi, ka ihe atu, compotes, tomato na sirop, jams, preserves, etc. Cowberry na sirop na-enweghị isi nri dị mkpa pụrụ iche.
Ọ dịghị ihe bara uru bụ mkpụrụ tomato ndị dị ka: sunberry, goozberị, currant (nwa, ọcha, ọbara ọbara), oké osimiri buckthorn, cloudberries, cranberries, nwa eze, goji, mulberry, mkpụrụ vaịn na udara.
Na usoro ịkwadebe blanks maka oyi, ị ga-akwadebe ihe ndị a na-esote akụrụngwa:
tank (enamel pan ma ọ bụ stewpan) maka esi nri syrup na tomato;
akwa nhicha maka ihicha mkpụrụ ma ọ bụ sieve;
ite iko maka ịchekwa blanks.
Maka syrup lingonberry ị ga - achọ ihe ndị na - esonụ (maka otu ite):
ọhụrụ-frozen lingonberries - 180 g;
mmiri dị ọcha - 60 ml.
Igodo nke dị elu, ezi owuwe ihe ubi na ezi ahụike ka a họọrọ nke ọma, beri bọta.
A na-egbute mkpụrụ osisi Lingonberry n'oge oge zuru ezu, mgbe tomato na-enweta ụcha acha ọbara ọbara. Ọ bụ n'oge a na ọnụ ọgụgụ kachasị nke benzoic acid na-agbakọta n'ime mkpụrụ osisi ahụ, nke bụ maka maka ichebe mkpụrụ osisi ahụ.
Mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa kwesịrị ịṅa ntị na agba ya na ụdị ya. Ọ bụrụ na tomato dị nro ma na-acha uhie uhie - ha agaala, ha agaghị eguzo ruo ogologo oge. Ọ ka mma inye mkpụrụ maka mkpụmkpụ mkpụrụ, ma ọ bụghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. E kwesịghị ịzụta beri na-adịbeghị ndụ, n'ihi na ọ dị iche, nke mbụ, site na nhụcha dị mma, na, nke abụọ, a pụghị ịchekwa ya, ma ụbọchị ole na ole ọ ga-aka njọ.
Ọ dị mkpa! Na tomato adịghị edozi onwe ha. Ya mere, mgbe ị na-azụ mkpụrụ osisi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ adịghị atụ anya na ha ga-acha uhie uhie na ndị toro eto.
Nri lingonberries na sirop n'ebe obibi dị mfe, maka nke a, ị ga-agbaso ntụziaka ndị a:
Richaa tomato ọma na mmiri, wepu mkpụrụ osisi ọ bụla rere ure, ị ga-agba, alaka, epupụta, kpoo akwa akwa ma ọ bụ jiri sieve.
Tinye mkpụrụ osisi na saucepan, kpuchie ha shuga, tinye mmiri ma tinye akpa ahụ na ọkụ.
Kpoo uka na obere okpomọkụ nke 10-15 nkeji, ekwela ka o sie.
Mee ka okpomọkụ dịkwuo elu, weta tomato na obụpde, mana anaghị esi.
Gbanyụọ uka ahụ, jupụta ite iko ndị dị na sterilized, mechie lids.
N'elu oven kpụ ọkụ n'ọnụ ruo ogo 150, gbanwee ite ndị ahụ na bọmbụ ahụ, kpoo ọkụ n'ọnọdụ "convection" maka nkeji 15.
Were akpa ya na tomato, tinye akwa nhicha. Kwe ka ajụkwa oyi.
Iji mee ka mkpụrụ osisi cranberry biekwu juputara, enweghi nkwekorita na obi uto, a na-agbakwunye ya ihe di iche iche.
Lemon ihe ọṅụṅụ ga-enye lingonberries ihe dị iche iche ọhụrụ ekpomeekpo ma gbakwunye uto ya na hints nke citrus. Iji esi nri na lemon mee nri, ị ga - ewere:
cranberries - 1 n'arọ;
shuga - 300 g;
ihe ọṅụṅụ lemon na-atọ ụtọ;
mmiri - 400 ml.
Ị ma? Lingonberry ohia - ogologo oge, ya, dịka osisi, nwere ike ịdị ndụ ruo narị afọ atọ.
Richaa tomato kpamkpam, kpoo ha na akwa akwa.
Ghọta mkpụrụ osisi ahụ na ite olulu.
Saa sugar sirop na iche iche: gbanye shuga n'ime mmiri, tinye ihe ọṅụṅụ lemon, obụpde, ka jụụ maka ntakịrị ihe.
Wunye mkpụrụ osisi ahụ na-esi nri, mechie mkpuchi, tinye ya n'ime ngwa nju oyi ma ọ bụ n'ebe dị jụụ.
Dị ka ihe na-agbakwunye na nri mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi apụl zuru okè. Iji kwadebe ihe dị ụtọ tinye cowberry na sirop na apụl, a na-atụ aro ka ị kwadebe ihe ndị na-esonụ:
cranberries - 5 n'arọ;
apụl - 1 n'arọ;
shuga - 1 n'arọ;
mmiri - 5 l;
Nri - 2-3 PC.
Na-asa linenonberries, ụdị, akọrọ na akwa nhicha.
Nri sugar syrup: gbanye shuga n'ime mmiri, tinye cloves na pawuda. Obụpde maka nkeji 5, dị jụụ, nsogbu.
Richaa apụl, belata isi, bee n'ime akụkụ anọ.
Yet a oyi akwa nke lingonberry 5-7 cm ke akwa enamel akpa, mgbe ahụ a oyi akwa apụl. Ya mere, mee ka etu ole na ole, ndị ikpeazụ ga-abụ cranberries.
Lingonberry-apple billet wunye sirop. Rụlite ala ọ bụla ka ọ ghara ibili.
Chekwaa akpa nke tinye linenonberries na ebe dị mma maka ihe dị ka izu abụọ. Mgbe ụbọchị 14 gasịrị, ị nwere ike ịnwale nri.
E kwesịrị ịchekwa blanks na refrjiraeto, okpuru ulo, okpuru ulo ma ọ bụ n'ebe ọzọ ọchịchịrị, ebe dị jụụ. Mkpụrụ osisi na sirop ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọ bụla adịghị edozi nchekwa dị ogologo oge, ha ga-ekpo ọkụ na ọnwa 2-3.
Maka nchekwa nchekwa ogologo oge a na-atụ aro ya iji sterilaiz beri. Dị ka ndị dị otú ahụ, a pụrụ itinye ya na ebe gbara ọchịchịrị n'ime ime ụlọ ma chekwaa maka ihe dịka otu afọ.
Gụkwuo banyere ịkwadebe lingonberries maka oyi.
A na-echekwa mkpụrụ osisi mịrị amị. A na-akpọnwụ ha na oven na-ekpo ọkụ, tinye ya na akpa osisi, kpuchie ya na mpempe akwụkwọ na n'elu.
N'oge oyi, na-eri nri na tomato ọhụrụ nke lingonberries, ọ dị mkpa iji kpochaa ha, dozie ha, wepụ ire ere, ma kpoo n'elu akwa akwa.
Mkpụrụ osisi zuru ezu na-etinye n'ime nkata ma ọ bụ osisi, tinye ya n'ọchịchịrị, dị jụụ. Na usoro a, ngwaahịa ahụ nwere ike ịdịru ruo ụbọchị 60.
Lingonberry bụ obere perennial evergreen shrub nke ezinụlọ Heather. The shrub nwere branched stalk, nke na-emi odude shiny leathery epupụta nke elongated ụdị. Ogo nke Ome dị iche site na 15 ruo 40 cm. Osisi na-acha ọcha na obere okooko osisi. Akpa tomato chara chara na etiti oge okpomọkụ, gburugburu July, a na-ewe ihe ubi nke abụọ na September. The tomato dị obere na nke, na-egbuke egbuke-acha uhie uhie na tart, ilu-utoojoo uto.
Ị ma? Na Latin, okwu ahụ bụ "lingonberry" pụtara "osisi vaịn sitere n'ugwu Phrygian Ida". E nwere nkwenkwe na n'ebe ndị a bi chi nwanyị ọmụmụ bụ Kibel, bụ onye e ji isi nri kranberị mee ka ọ bụrụ isi ya.
Ọ bụghị n'efu ka a na - akpọ dọkịta maka ọrịa niile; ihe ngwongwo ya pụrụ iche ekpebiwo ọtụtụ ụdị ọgwụgwọ kachasị mma. Ọ bụ isi iyi nke ọtụtụ vitamin dị mkpa, micro na macro elements.
E gosipụtara na mkpụrụ osisi ahụ na-egosipụta mmetụta na-adịghị mma megide ọtụtụ ụdị etuto ọjọọ, karịsịa, ọrịa leukemia, ọrịa cancer na-arịa ọrịa cancer, ọrịa cervix.
Uru nke tomato dị n'ime ọdịnaya nke carbohydrates, organic na acid inorganic, carotene, tannins, na-arụsi ọrụ ike na-enyere aka wepụ ọtụtụ nsogbu metụtara ọrụ nke eriri afọ, eriri urinary, cardiovascular and nervous systems.
Ọ na-eme ka ọ dị ike ma na-agbanye nsogbu, nwere mgbochi mkpali, antioxidant, mgbochi nje. Uru nke mkpụrụ osisi ahụ bụ:
ndi na - edozi - 0.7 g;
N'otu oge ahụ, ọdịnaya caloric nke ngwaahịa ahụ dị obere, na naanị 43 kcal kwa 100 g nke tomato.
Mkpụrụ vitamin na ịnweta nke lingonberry gụnyere:
vitamin a. Mee ka akpụkpọ anụ ahụ dịghachi, na-emezi usoro usoro metabolic, na-egbochi ịka nká nke anụ ahụ;
vitamin C. Na-eme ka ahụ dịkwuo ike, na-eme ka ọ kwụsị iguzogide ihe dị iche iche na-ezighị ezi na mpụga, na-ewebata usoro usoro oxidative;
vitamin E. Na-eme ka ikuku oxygen baa n'ime sel, na-ewusi mgbidi nke arịa ọbara, na-edozi ọkwa cholesterol, na-ebelata ohere nke ọrịa obi;
otu vitamin B (riboflavin, niacin, thiamine). Ha na-etinye aka na njikọ protein, na-eme ka ọrụ nke ụjọ ahụ, usoro nke obi, na-ahụ maka mmepụta ike;
ígwè. Ọ na-egbochi mmepe nke anaemia, na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, na-enye gị ohere iweghachi ike, na-enye ike;
site na mmiri. Ọ na-arụ ọrụ ụbụrụ, na-ekere òkè na usoro nhazi nke anụ ahụ, na-enyere aka emetụ ọtụtụ mineral;
calcium. Na-eme ka akpụkpọ ụkwụ na arịa ọbara dị ike, na-enye aka maka ịkpụzi ọkpọ ahụ kwesịrị ekwesị, na-edozi ọrụ nke usoro ahụ ike;
magnesium. Ọ na-eme ka mgbatị na mkpịsị ụkwụ na-arụ ọrụ, na-egbochi ike ọgwụgwụ na nchekasị, ịlụ ọgụ na ehighị ụra nke ọma, na-ewusi mgbidi nke arịa ọbara;
manganese. Kwadoro mmepe nke ahụ ahụ, na-enye aka iji nweta ọla kọpa, ígwè na thiamine, na-eme ka mmeghachi omume enzymatic dị mkpa.
Ke adianade do, tomato nwere organic acids - malic, citric, tartaric, lactic, salicylic, succinic, yana sugar, mmanu ozo na tannins.
N'ihi ihe ndị e kere eke, ndị tomato nwere mmetụta dị mma na ọtụtụ usoro ahụ. Otu n'ime ihe ndị bụ isi nke mkpụrụ osisi ahụ bụ ike ichebe ya pụọ ​​na ọrịa na-ebute urinary ugboro ugboro.
The infusion nke tomato nwere diuretic, antiseptic na astringent mmetụta, na-enyere aka ịlụso ndị causative mmadụ nke nje bacteria, gbochie mmepe nke cystitis, urolithiasis, pyelonephritis.
A na-ejikarị osisi ndị dị ka: mordovnik, osisi junipa, arịa ịsa ahụ, goldenrod, stonecrop buru ibu, spurge, safflower na chervil na diuretic.
A na-ewere Lingonberry dị irè maka iwepụ ihe mgbu na mbufụt na rheumatism, arthritis, arthrosis, gout. Ọ bụ ngwá ọrụ dị irè iji bulie nsogbu, na-ebelata ihe ize ndụ nke oyi.
Ịdị na-eji tomato eme ihe mgbe nile na-eme ka ọnọdụ nke oghere uzo gbanwee, na-egbochi ọbara ọgbụgba, na-ewusi ntutu na ntu. A na-egosi ihe ọṅụṅụ na-egbu Lingonberry maka ọrịa intestinal, ọrịa dịgasị iche iche nke akụkụ ahụ digestive.
A na-eji mkpụrụ osisi ahụ emeziwanye ọhụụ. Ha na-agba ọsọ ahụ, na-enwe mmetụta na-emegharị ahụ, gbochie ịka nká.
"Berries nke anwụghị anwụ" na-emekarị ọgwụ dị iche iche iji merie ọrịa dịgasị iche iche. Otú ọ dị, e nwere ndị mmadụ - ụmụ nwanyị dị ime ma na-agba umuaka, ụmụaka - bụ ndị a ga-eji ngwaahịa ahụ mee ihe.
Na enweghị onye na-ekweghị na onye ọ bụla ma ọ bụ onye na-adịghị ahụ ya, ọ na-ekwe ka o rie lingonberries maka ndị inyom n'ọnọdụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, dọkịta na-ede ya na ụma.
Ọ dị mkpa! O di nkpa iri nri n'emekere mbu nke ime ime na nlezianya anya, dika o nwere ike ime ka ụda olu, imechi nke akpanwa. A na-atụ aro mkpụrụ osisi iji tinye ya na efere site na ibe.
Iji gbochie ụkọ vitamin na mineral ndị dị oké mkpa, ọ ga-ezuru ụmụ nwanyị dị ime iri mkpụrụ tomato ụfọdụ n'ụbọchị. Ha nwere mmetụta diuretic na-adịghị ike, ya mere n'ụzọ zuru oke wepu nsị ahụ ma gbochie ọdịdị ha.
Lingonberry ihe ọṅụṅụ na-ekpochapụ nsogbu na mgbaze, na-ebelata ihe ize ndụ nke mmetụta ọjọọ nke ihe ndị dịpụrụ adịpụ, n'oge oyi na-atụkwa ike iji dochie ọgwụ. N'oge a na-agba umuaka, ọ dị mkpa karịsịa ka nwanyị kwado usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na ihe dị mkpa nke vitamin, ya mere, maka nke a, a na-ahapụ ya ka ị gbakwunye tomato ọhụrụ ma ọ bụ ịkwadebe ya maka nri.
Ngwongwo Lingonberry na enye aka n'ichebe ike na ike n'ime nne, normalize ụra, na-alụso ịda mbà n'obi na ụra na-alụ ọgụ, na-akwado ọrụ nkịtị nke usoro ụjọ ahụ na akụkụ eriri afọ. Na mgbakwunye, ha nwere mmetụta dị mma na ọnọdụ akpụkpọ, mbọ na ntutu.
A ga-atụfu mkpụrụ osisi Cowberry mgbe:
usoro mgbali ọbara.
A na-atụ aro ka ịmalite ịmị ngwaahịa ahụ mgbe nwa ọhụrụ dị ọnwa atọ. Akụkụ mbụ ga-ejedebe na ọkara nke beri kwa ụbọchị, jiri nwayọọ nwayọọ na-amụba usoro.
Gụnye mkpụrụ osisi na nri ụmụ gị ekwesịghị ịbụ abụba, kama n'ụdị mkpụrụ osisi ọṅụṅụ, juices, jams, wdg.
Ọ dị mkpa! Dịka ọmụmaatụ, n'ụdị ego maka ịgwọ ọrịa dịgasị iche iche, dịka ọmụmaatụ, infusions, decoctions, lingonberries nwere ike iwepụ ụmụaka karịa 12 afọ.
Ọ ka mma ịkwụsị ịma na blanon blanks ruo mgbe nwa ọhụrụ dị otu afọ. Nchịkọta mbụ kwesịrị ịmalite na obere obere doses. Na enweghị mmeghachi omume na-ezighị ezi nke organism na ngwaahịa ọhụrụ, a ga-enwewanye ụda ya.
A na-atụ aro ka e jikọta mkpụrụ osisi na tomato ndị ọzọ, mkpụrụ osisi ma ọ bụ dịka akụkụ nke efere dị iche iche: salads, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, puddings, curd casseroles, wdg.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-eme ka a na-eji lingonberries eme ihe. Mkpụrụ osisi na ihe ọṅụṅụ si n'aka ha ga-ewepu nri na afọ ọnya afọ na gastritis na akwa acidity, hypotension, urolithiasis, cholecystitis, ụmụaka n'okpuru otu afọ. Na ndị na-elekọta tomato ga-eji ndị mmadụ na-enwe mmetụta nrịanya.
A ghaghị icheta na beri, na-eto eto na mpaghara ndị e merụrụ emerụ, nwere ike imubanye ihe ndị na-emerụ ahụ, toxins, ọla arọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-eri nanị ngwaahịa ahụ anakọtara na ebe nchekwa gburugburu ebe obibi, na àgwà nke ị maara.
Ọ ga-aba uru maka ị mụta otú e si etolite lingonberries na dacha, yana ụdị dịgasị iche iche ya.
Ndị dọkịta anaghị akwado ịṅụ ọgwụ ọjọọ, bụ nke ndị na-esi nri ma ọ bụ ndị na-emepụta ihe dị na ya, ozugbo ha risịrị nri, a na-ewere ha na afo efu ma ọ bụ tupu ha eri nri. Ebe ọ bụ na mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ịbara ọbara ahụ ọbara, ndị mmadụ agaghị eri ya, ma ọ bụ mgbe ọbara ọgbụgba. Lingonberry bụ bred aromatic nke nwere ike ime ka ọ bụghị naanị site n'inwe obi uto, kamakwa ya na ọtụtụ mmiri bara uru. Ịṅụ nri nke tomato, juices, jams ma ọ bụ compotes ga-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike ma mee ka ahụ dịkwuo anyị mma, nke ga-eme ka ọ dị mma iji melite ndụ mmadụ. Ma na-eri ihe oriri bara uru, ị gaghị echefu ihe ndị nwere ike ime.